170 qof ayaa ku dhimatay shil diyaaradeed oo maanta ka dhacay wadanka Iiraan. – Shabakadda Amiirnuur
170 qof ayaa ku dhimatay shil diyaaradeed oo maanta ka dhacay wadanka Iiraan.
January 8, 2020 7:21 am by admin Views: 69
Wararka ka imaanaya dalka Iiraan ayaa sheegaya in khasaare badan uu ka dhashay shil diyaaradeed oo subaxnimadii saaka ka dhacay caasimadda dalkaas, ka dib markii diyaarad rayid ah oo reer Ukraine ah ay burburtay taasoo daqiiqado uun kasii maqnayd garoonka caalamiga ah ee Khomeini ee ku yaal magaalada Tehraan, waxaana ilo wareedyo Iiraani ah ay xaqiijiyeen in shilka uu u dhacay arrimo farsamo awgeed.
Ali Kashani, oo ah agaasimaha xiriirka dadweynaha ee garoonka diyaaradaha, ayaa sheegay in diyaaradda Boeing 737 ay ku sii jeedday caasimada Ukraine, Kiev, ayna ku dhacday gobolka Brend oo u dhow garoonka diyaaradaha koonfur-galbeed ee Tehraan, isagoo carrabka ku adkeeyay in cilad farsamo ka dambeyso shilkan.
Wakaaladda wararka ee rasmiga ah ee dalkaas oo soo xigatay afayeen u hadlay garoonka diyaaradaha ayaa sheegtay in diyaaradda ay sidday 176 qof, oo ay ku jiraan 167 rakaab ah iyo sagaal shaqaale ah.
Taleefashinka dowladda wuxuu xaqiijiyay in dhammaan dadkii diyaaradda saarnaa ay dhinteen.
Wararka qaar ayaa sheegaya in shaqaalihii diyaaradda ay badbaadeen inkastoo aanan la xaqiijin, laakin madaxa Bisha Cas ee Iiraan ayaa sheegay in aysan macquul ahayn kuwa badbaaday ay ka mid noqdaan rakaabka diyaaradda.
Iiraan waxay sheegtay in wixi tafaasiil dheeraad ah ee kasoo baxay shilkan ay soo bandhigi doonto. Dhanka kale shirkadda American Boeing ayaa sheegtay inay ka warqabto shilka diyaaradeed ee ka dhacay Iran, isla markaana ay uruurineyso macluumaad dheeraad ah.